ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကုသမှုနှင့်တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်လယ်သမားအများစုအတွက် ၀ င်ငွေများစွာရရှိစေရုံသာမကသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းများအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ အဓိကအားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အပင်များ (ဥပမာ - မွေးမြူရေးမြေ, ဇာ၊ ကောက်ပဲသီးနှံစသည်ဖြင့်) မှရရှိသောအဏုဇီဝဓာတ်မြေသြဇာနှင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာများနှင့်အတူဓာတ်မြေသြဇာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းသောကုသမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ဒီဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်ဆုံးဖြတ်သည်: သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ၏ (1) တိကျတဲ့ function ကို။ (2) အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ကုသ။
ဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာတွင်အလုပ်လုပ်သောသေးငယ်သောဇီ ၀ သက်ရှိများသည်များသောအားဖြင့်မြေဆီလွှာနှင့်မြေဆီလွှာအသုံးချပြီးနောက်တွင်ကောက်ပဲသီးနှံများကြီးထွားမှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့်ဘက်တီးရီးယား၊ မှိုနှင့်အက်တီနိုမီစီနက်များအပါအ ၀ င်အဏုဇီ ၀ သက်ရှိများကိုရည်ညွှန်းသည်။ သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းခွဲခြားနိုင်သည် -
၁။ နိုက်ထရိုဂျင်ပြုပြင်သောဗက်တီးရီးယားများ - (၁) သင်္ကေတနိုက်ထရိုဂျင်ပြုပြင်သောဘက်တီးရီးယားများ - အဓိကအားဖြင့် leguminous သီးနှံရူဇဘီးယားကိုရိုင်ဇဘီးယား၊ နိုက်ထရိုဂျင်ပြုပြင်ခြင်းရူဇဘီးယား၊ Franklinella, Cyanobacteria ကဲ့သို့သောသီးနှံမဟုတ်သောနိုက်ထရိုဂျင်ပြုပြင်သည့်ဘက်တီးရီးယားများသည်၎င်းတို့၏နိုက်ထရိုဂျင် fixation ထိရောက်မှုမြင့်မားသည်။ ogen Autogenous nitrogen-fixing ဘက်တီးရီးယားများ - ဥပမာအညိုရောင်နိုက်ထရိုဂျင် fixing ဘက်တီးရီးယားများ၊ photosynthetic ဘက်တီးရီးယားများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော Pseudomonas genus, lipogenic nitrogen-fixing helicobacteria စသည်တို့ဖြစ်သည်။
မှိုများကိုဖျက်သိမ်းခြင်းဖော့စဖရပ် - Bacillus (ဥပမာ Bacillus megacephalus, Bacillus cereus, Bacillus humilus စသည်)၊ Pseudomonas (Pseudomonas fluorescens ကဲ့သို့)၊ နိုက်ထရိုဂျင်ပုံသေဘက်တီးရီးယား၊ , Streptomyces, etc
3. ဖျက်သိမ်း (ဖျက်သိမ်း) ပိုတက်စီယမ်ဘက်တီးရီးယား: silicate ဘက်တီးရီးယား (ထိုကဲ့သို့သော colloid Bacillus, colloid Bacillus, cyclosporillus), silikat မဟုတ်သောပိုတက်စီယမ်ဘက်တီးရီးယား။
4. Antibiotics: Trichoderma (ထိုကဲ့သို့သော Trichoderma harzianum ကဲ့သို့)၊ actinomycetes (ဥပမာ Streptomyces flatus, Streptomyces sp ။ sp ။ )၊ Pseudomonas fluorescens, Bacillus polymyxa, Bacillus subtilis မျိုးများစသည်တို့။
6. ပလက်ဖောင်းဘက်တီးရီးယား - Pseudomonas gracilis မျိုးစိတ်များစွာနှင့်မျိုးစိတ် Pseudomonas gracilis မျိုးစိတ်များစွာ။ ဤမျိုးစိတ်များသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ရှေ့မှောက်တွင်ကြီးထွားနိုင်ပြီးဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ရန်သင့်လျော်သောစွမ်းရည်ရှိသောအေရိုးဗစ်ဗက်တီးရီးယားများဖြစ်သည်။
7. အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့်တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်သည့်ဘက်တီးရီးယားများ - Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Phylloidase, Cordyceps နှင့် Bacillus ။
၈။ Cellulose decomposition ဘက်တီးရီးယားများ - thermophilic lateral spora၊ Trichoderma, Mucor စသည်တို့ဖြစ်သည်။
၉. အခြားအလုပ်လုပ်သောသေးငယ်သောဇီ ၀ သက်ရှိများ - အဏုဇီဝသက်ရှိများသည်မြေထဲသို့ ၀ င်ပြီးနောက်သူတို့သည်အပင်ကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်နှင့်ဇီဝကမ္မတက်ကြွသောအရာများကိုထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်တဆေးနှင့်လက်တစ်အက်စစ်ဘက်တီးရီးယားကဲ့သို့သောမြေဆီလွှာအဆိပ်များအပေါ်သန့်စင်ခြင်းနှင့်ပြိုကွဲခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
2) ပြိုကွဲပျက်စီးသောတိရိစ္ဆာန်အကြွင်းအကျန်များမှဆင်းသက်လာအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ။ ကစော်ဖောက်ခြင်းမပါသောအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများသည်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ရန်တိုက်ရိုက် အသုံးပြု၍ မရပါ၊ ထို့အပြင်စျေးကွက်သို့မရောက်ရှိနိုင်ပါ။
ဘက်တီးရီးယားများသည်ကုန်ကြမ်းများနှင့်အပြည့်အဝထိတွေ့နိုင်ရန်နှင့်စေ့စေ့စပ်စပ်ကစော်ဖောက်ခြင်းများရရှိစေရန်၎င်းကို ဖြတ်၍ အညီအမျှလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ compost Turner စက် အောက်ပါအတိုင်း:
(၁) မစင်များ - ကြက်၊ ဝက်၊ နွား၊ သိုး၊ မြင်းနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်ချေးများ။
(၂) Straw: ပြောင်းဖူးကောက်ရိုး၊ ကောက်ရိုး၊ ဂျုံကောက်ရိုး၊ ပဲပုပ်ကောက်နှင့်အခြားသီးနှံပင်။
(3) ခွံနှင့်ဖွဲ။ ဆန်ခွံမှုန့်၊ မြေပဲခွံအမှုန့်၊ မြေပဲပျိုးပင်အမှုန့်၊ ဆန်ဖွဲနု၊ မှိုဖွဲစသည်တို့။
(၄) အစက်များ - ဖြည်းညှင်းစွာသက်ရောက်သည့်အစက်များ၊ ပဲပုပ်ငံပြာရည်၊ ရှလကာရည်အစက်များ၊
(၅) ကိတ်မုန့်၊ ပဲပုပ်မုန့်၊ ပဲပိစပ်၊ ဆီ၊
(၆) အခြားအိမ်တွင်းရွှံ့နွံများ၊ သကြားသန့်စင်စက်ရုံများမှရွှံ့များ၊ သကြားရွှံ့များ၊
ဤကုန်ကြမ်းများကိုအရန်အာဟာရကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည် ဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ၏ထုတ်လုပ်မှု ကစော်ဖောက်ခြင်းပြီးနောက်။
1, တိကျတဲ့ပိုးမွှားဘက်တီးရီးယားကိုရွေးပါ: တစ် ဦး သို့မဟုတ်နှစ် ဦး ကိုမျိုးအဖြစ်အများဆုံးသုံးမျိုးထက်မပိုအဖြစ်သုံးနိုင်တယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘက်တီးရီးယားများ၏ရွေးချယ်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုအကြားအာဟာရများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ကြောင့်တိုက်ရိုက် offset ၏အပြန်အလှန် function ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြသော။
၂။ ဖြည့်စွက်ပမာဏကိုတွက်ချက်ခြင်း - တရုတ်နိုင်ငံရှိဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစံနယူးယောက် ၈၈၂ မှ ၂၀၁၂ အရ၊ သက်ရှိဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာသက်ရှိဘက်တီးရီးယားအရေအတွက်သည် ၀.၂ သန်း / ဂရမ်သို့ရောက်ရှိသင့်သည်။ အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းတစ်တန်တွင် kg10 ဘီလီယံ / ဂရမ်ထိသက်ရှိရှင်သန်နေသောဘက်တီးရီးယားအရေအတွက် ၂ ကီလိုဂရမ်ထက် ပို၍ တိကျသောအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများကိုထည့်သွင်းသင့်သည်။ တက်ကြွသောဘက်တီးရီးယားအရေအတွက် ၁ ဘီလီယံ / ဂရမ်ဖြစ်လျှင်ကီလိုဂရမ် ၂၀ ကျော်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကွဲပြားခြားနားသောစံများတွင်ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။
၃။ ထည့်သွင်းခြင်းနည်းလမ်း - လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလက်စွဲတွင်ဖော်ပြထားသောနည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်သောဗက်တီးရီးယား (အမှုန့်) ကိုအချဉ်ဖောက်သည့်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းထဲသို့ထည့်ပါ၊ အညီအမျှလှုပ်ပါ။ ထုပ်ပိုးပါ။
၄။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ - ၁။ ၁၀၀ above အထက်အပူချိန်တွင်မခြောက်ပါနှင့်၊ သို့မဟုတ်ပါက ၄ င်းသည်ဘက်တီးရီးယားများကိုသေစေနိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့ရန်လိုအပ်ပါကခြောက်သွေ့ပြီးနောက်ထည့်သွင်းသင့်သည်။ (၂) အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်စံတွက်ချက်နည်းဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသောဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာတွင်ဘက်တီးရီးယားပါဝင်မှုသည်စံပြအချက်အလက်များနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အလုပ်လုပ်သောအဏုဇီဝသက်ရှိများကိုစံပြအချက်အလက်များထက် ၁၀% ကျော် ပိုမို၍ ပေါင်းထည့်သည်။ ။
တိုက်ရိုက်ဖြည့်စွက်သည့်နည်းလမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤနည်းသည်ဘက်တီးရီးယားများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေသည်။ အားနည်းချက်မှာသေးငယ်သောသေးငယ်သောပိုးမွှားပမာဏကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြည့်စွက်ပမာဏသည် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်အထက်ထပ်ပေါင်းထည့်သည့်နည်းလမ်းထက်မြင့်မားပြီးဒုတိယဇီ ၀ သက်သောနည်းလမ်းဖြင့်အမျိုးသားဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစံနှုန်းကိုရောက်ရှိရန်အကြံပြုသည်။ စစ်ဆင်ရေးအဆင့်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
၁။ တိကျသောပိုးမွှားဗက်တီးရီးယားများ (အမှုန့်) ကိုရွေးချယ်ပါ။ တစ်မျိုး၊ နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ အများဆုံးသုံးမျိုးထက်မပိုပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဘက်တီးရီးယားများ ပို၍ ရွေးချယ်သောကြောင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အကြားရှိအာဟာရများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကြောင့်ဘက်တီးရီးယားအမျိုးမျိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၂။ ဖြည့်စွက်ပမာဏကိုတွက်ချက်ခြင်း - တရုတ်နိုင်ငံရှိဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစံနှုန်းအရ၊ သက်ရှိဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ၏ဘက်တီးရီးယားအရေအတွက်သည် ၀.၂ သန်း / ဂရမ်သို့ရောက်ရှိသင့်သည်။ အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းတစ်တန်တွင်သက်ရောက်မှုရှိသောပိုးမွှား powder ၁၀ ဘီလီယံ / ဂရမ်ထိမှန်သည့်ပိုးမွှား (အမှုန့်) အနည်းဆုံး ၀.၄ ကီလိုဂရမ်ထည့်သွင်းသင့်သည်။ တက်ကြွသောဘက်တီးရီးယားအရေအတွက် ၁ ဘီလီယံ / ဂရမ်ဖြစ်ပါက ၄ ကီလိုဂရမ်ထက် ပို၍ ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖြည့်စွက်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများသည်ကွဲပြားသောစံနှုန်းများကိုလိုက်နာသင့်သည်
၃။ ပေါင်းထည့်ခြင်းနည်းလမ်း - လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ဘက်တီးရီးယား (အမှုန့်) နှင့်ဂျုံအသည်း၊ ဆန်ခွံမှုန့်၊ ဖွဲနို့သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုရောစပ်ရန်အတွက်၊ အချဉ်ဖောက်သည့်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများထဲသို့တိုက်ရိုက်ပေါင်းထည့်၊ အညီအမျှရောစပ်ခြင်း၊ အလုပ်လုပ်တဲ့ဘက်တီးရီးယား Self- ဝါဒဖြန့်။
4. အစိုဓာတ်နှင့်အပူချိန်ထိန်းချုပ်ခြင်း။ ။ အစုစပ်ကစော်ဖောက်ခြင်းအတွင်းအစိုဓာတ်နှင့်အပူချိန်ကိုအလုပ်လုပ်သောဘက်တီးရီးယားများ၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာများအရထိန်းချုပ်သင့်သည်။ အကယ်၍ အပူချိန်မြင့်မားလွန်းပါက stack အမြင့်ကိုလျှော့ချသင့်သည်။
၅။ တိကျသောအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဘက်တီးရီးယားပါဝင်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်း - အစုအဝေးပြီးသောအခါနမူနာများနှင့်တိကျသောအဏုဇီဝသက်ရှိများ၏ပါဝင်မှုသည်စံနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကြိုတင်စမ်းသပ်ရန်ပိုးမွှားစစ်ဆေးခြင်းစွမ်းရည်ဖြင့်အဖွဲ့အစည်းသို့စေလွှတ်ပြီး၊ ၎င်းကိုအောင်မြင်နိုင်ပါက၎င်းသည်ဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီနည်းလမ်းအားဖြင့်။ အကယ်၍ ၎င်းမအောင်မြင်ပါကတိကျသောအလုပ်လုပ်သောဘက်တီးရီးယားများထပ်မံပမာဏကို ၄၀% အထိတိုးမြှင့ ်၍ စမ်းသပ်မှုကိုအောင်မြင်သည်အထိထပ်မံပြုလုပ်ပါ။
၆။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ - ၁၀၀ above အထက်အပူချိန်တွင်ခြောက်သွေ့အောင်မလုပ်ပါနှင့်။ ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ဘက်တီးရီးယားများကိုသေစေနိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့ရန်လိုအပ်ပါကခြောက်သွေ့ပြီးနောက်ထည့်သွင်းသင့်သည်။
ထဲမှာ ဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခြင်း အချဉ်ဖောက်ပြီးနောက်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ခြောက်သွေ့သောရာသီတွင်လေနှင့်အတူမကြာခဏပျံတတ်သောအမှုန့်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးကုန်ကြမ်းများနှင့်ဖုန်မှုန့်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ဖုန်မှုန့်များကိုလျှော့ချရန်နှင့်ကိတ်မုန့်ကိုတားဆီးရန် \_ tgranulation ဖြစ်စဉ်ကို မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ သင်အသုံးပြုနိုင်သည် အဆိုပါနှိုးဆော်သွား granulator granular အတွက်အထက်ပါပုံတွင် humic acid၊ ကာဗွန်နက်၊ kaolin နှင့်အခြားကုန်ကြမ်းများကို granulate လုပ်ရန်အသုံးချနိုင်သည်။